game – @mmunited
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Steemmonsters ဂိမ်းကို အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အခုဒီ ပိုစ့်မှာတော့ quest တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ရေးသားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး စကားလုံး နှစ်လုံးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒိနေရာမှာ Water Splinter ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Water Splinter ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ summoner တွေကိုပဲဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Monsters တွေကတော့ summoner ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ame Splinter Rarity Mana Cost Malric Inferno Fire Rare3Talia Firestrom Fire Epic2Alric Strombringer Water Rare3Xia …
game steem steempress
My score on Gold Miner/ earn upvotes by playing games/promoting goldminer
Asagamer sometimes I played game . Today I am playing games in https://www.steemitgoldminer.com. There arealot of games to play. If you visit to goldminer you will see like the below image. I chose play mini games here. Next screen will be like in the following video. Gold miner is an interesting game. …